China Products Factory, mpamatsy vokatra
Paompy fanadiovana ara-pahasalamana
JINGYE Sanitary Centrifugal Pump: mety amin'ny famindrana ho an'ny vokatra azo avy amin'ny rano, toy ny rano, ranom-boankazo, zava-pisotro, sns. Mifikitra amin'ny fanahin'ny orinasanay "Kalitao, Fahombiazana, fanavaozana ary fahamendrehana" izahay. Izahay dia mikendry ny hamorona lanja lavitra kokoa ho an'ireo mpividy miaraka amin'ny loharanon-karena betsaka, milina maodely, mpiasa efa za-draharaha ary serivisy manam-pahaizana miavaka amin'ny vidin'ny ambany China Consumer Energy Low sy Pump-Centrifugal Sanitary Centrifugal Pump for Liquid, tongasoa ny mpanjifa rehetra any an-trano sy any ivelany hitsidika ny orinasanay, hanangana ho avy mamiratra amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa.
Ny vidiny ambany, China Centrifugal Pumps, Water Pumps, tongasoa eto hitsidika ny orinasanay sy ny ozininay, misy vahaolana isan-karazany aseho ao amin'ny efitrano fampirantiana izay hahatratra ny fanantenanao, mandritra izany fotoana izany, raha mety mitsidika ny tranokalanay ianao dia hanandrana ny ezaka ataon'izy ireo ny mpiasa. manome anao ny serivisy tsara indrindra
JINGYE Retort Sterilizer dia sambo mihidy izay mamono bakteria mampidi-doza amin'ny alàlan'ny fitsaboana hafanana hanatsarana ny androm-piainan'ny sakafo, miaraka amin'izay koa, araka izay azo atao mba hitehirizana ny tsiro sy ny sakafo mahavelona.
Misy karazany telo ny ny JINGYE Retort Sterilizers: karazan-tsifotra rano mafana, rano mafana hanitrika karazana sy karazana etona. Manolotra ny rafitra tsara indrindra izahay ho an'ny mpanjifa miankina amin'ny vokatra vokariny.
Side Spray Type Retort
Retort Sterilizer dia sambo mihidy izay mamono bakteria manimba amin'ny alàlan'ny fitsaboana hafanana hanatsarana ny sakafo talantalana fiainana, miaraka amin'izay koa, araka izay azo atao mba hitehirizana ny tsiro sy ny sakafo mahavelona. Fitaovana ilaina amin'ny sakafo lava talantalana izy io.
Rano manarona karazana rano misitrika
Rano fitifirana karazana rano
JINGYE Autoclave mitsangana dia fitaovana kely fanaovana sterilization, napetraka niaraka tamina heater elektrika, fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny auto pressure, valva fiarovana, valizy famotsorana, mari-pamantarana ny mari-pamantarana, lakolosy fanairana ho an'ny fanafoanana volo ary fitaovana iray hanapahana ho azy ny herin'ny heater. Izy io dia manana tombony amin'ny fanaovana sterilization mahomby, fandidiana mety, azo antoka, tsy mandany tanàna elektro ary mora vidy.
Tankary Emulsify Vaccum
JINGYE Vacuum High Shear Mixing Tank, antsoina koa hoe emulsify mixing tank, mampita amin'ny rafitra banga, rafitra manety avo, rafitra fampifangaroana, rafitra manainga mixer, sehatra fandidiana.
Kitapo fampifangaroana vacuum
JINGYE Vacuum Mixing Tank, manana loha boribory mifatotra amin'ny fototr'ilay tanky fampifangaroana mahazatra, mba hahafahan'izy ireo mampita amin'ny rafitra banga, manome fahafaha-manao bebe kokoa ny mpanjifa rehefa manamboatra vokatra manokana.
JINGYE High Shear Mixing Tank, antsoina koa hoe emulsify mixing tank, ilay emulsifying / high shear mixer manokana dia nanome azy asa manokana amin'ny fampifangaroana.
JINGYE Mixing Tank dia kaontenera fitehirizana sy fampifangaroana fitaovana. Namboarina mifanaraka amin'ny fenitra indostrialy henjana, JINGYE Mixing Tank dia namorona lanja ho an'ny mpanjifanay.
JINGYE Planeta Cooking Mixer body dia stamping mamorona hemispherical stainless vy vatan'ny vatan, mampiasa etona, gazy liquefied, gazy voajanahary ary endrika hafa fanafanana, fomba mandrisika mampiasa fiara mitongilana karazana drive, ny fampiasana ny planeta mpanentana sy ny vilany vatany fifandraisana feno, hahatratrarana ny revolisiona fandefasana sy ny fihodinan'ny tahan'ny fampitana tsy isa, ka ny vilany tsy mampihetsika ny Angle maty.
123 Manaraka> >> Pejy 1/3